Inona no Hataoko mba Tsy Hatavy Loatra? | Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mooré Myama Norvezianina Nzema Ossète Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tetun Dili Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Twi Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Milaza ny Baiboly fa tokony ‘ hahay handanjalanja ’ isika. (1 Timoty 3:2) Mila manao izany, ohatra, isika rehefa misakafo. Andramo àry izao:
Aza mihinana intsony rehefa voky. Hoy i Julia, 19 taona: ‘ Nitandrina be aho taloha mba tsy hatavy, fa izao aho tsy mihinana intsony fotsiny rehefa voky. ’
Aza mihinana sakafo matavy be na mamy be. Hoy i Kiady, 21 taona: “ Tsy nisotro sodà intsony aho, dia iray volana fotsiny dia nihena dimy kilao. ”
Aza atao intsony izay zavatra mahazatra anao nefa tsy mety. Hoy i Faniry, 19 taona: “ Miezaka tsy manampy aho rehefa misakafo. ”
Ity koa misy hevitra tsara: Miezaha foana hisakafo maraina sy antoandro ary hariva. Raha tsy izany dia ho noana be ianao, ka vao mainka hihinana be.
Tsy tena matavy akory indraindray ny olona miteny hoe: “Mila mampihena tena aho.” Mety tsara ny toe-batany. Ahoana anefa raha tena mila mampihena tena ianao? Diniho izay nataon’ny tovovavy iray atao hoe Catherine.
“Natavy loatra aho. Tsy tiako mihitsy anefa izany. Tsy tiako maizina ny bikako ary tsy azoko ny aiko.
“Niezaka nampihena tena aho ka nitandrina sakafo tsindraindray, nefa niverina tamin’ny habeko ihany aho. Tapa-kevitra àry aho tamin’izaho 15 taona fa hitady fomba mety tsara hampihenana tena, ary zavatra ho vitako mandritra ny androm-piainako no hataoko.
“Nividy boky momba ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena aho, ary narahiko izay voalaza tao. Tapa-kevitra aho fa hiezaka foana, na dia mety tsy haharaka sy ho kivy aza, indraindray.
“Nandaitra tokoa ilay izy! Nihena 27 kilao aho, tao anatin’ny herintaona. Tsy niova ny lanjako nandritra ny roa taona. Tsy nampoiziko mihitsy izany!
“Tsy noho izaho nitandrina sakafo fotsiny angamba no nahatonga izany, fa noho izaho nanova ny fomba fiainako.”—Catherine, 18 taona.
Vitan’ny lehilahy iray tia haninkanina ny nanova ny sakafo fihinany. Jereo ato ny tantarany.